We.com.mm - LGBT အတွက် ရေးထားတဲ့သီချင်းပါဝင်မယ့် တေလာဆွစ်ဖ်ရဲ့ သီချင်းခွေသစ် “Lover” ထွက်ရှိမည်
LGBT အတွက် ရေးထားတဲ့သီချင်းပါဝင်မယ့် တေလာဆွစ်ဖ်ရဲ့ သီချင်းခွေသစ် “Lover” ထွက်ရှိမည်
တေးသီချင်းအယ်လ်ဘမ်ထွက်တိုင်း အမြဲပေါက်လေ့ရှိပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ဂီတအနုပညာရှင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ တေလာဆွစ်ဖ် (Taylor Swift) ဟာ နိုင်ငံတကာက တေးချစ်သူပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကိုလည်း ညှို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ အမေရိကန်အဆိုတော်မလေး ဖြစ်ပါ တယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ တေလာဟာ အခုဆိုရင် သူ့ရဲ့ ခုနစ်မြောက်အယ်လ်ဘမ် အဖြစ် တေးအယ်လ်ဘမ်သစ် ထပ်မံ ထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တေလာရဲ့ တေးအယ်လ်ဘမ်သစ်ကို “Lover” လို့ နာမည်ပေးထားပြီး လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၃ မှာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန် ၁၃ ရက်နေ့တုန်းက ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုကြေညာပြီး နောက်တစ်ရက်၊ ဇွန် ၁၄ မှာတော့ အယ်လ်ဘမ်ထဲမှာပါဝင်မယ့် ဒုတိယမြောက် single သီချင်း “You Need to Calm Down” ကို ပွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အယ်လ်ဘ်သစ်အတွက် ပထမဆုံး single တေးသီချင်း “Me!” ကတော့ ပြီးခဲ့ဲတဲ့ ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့ကတည်းက ထွက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန် ၁၄ ရက်နေ့က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ တေလာရဲ့ single သီချင်းသစ် “You Need to Calm Down” ဟာ သူ့ကိုမုန်း တဲ့ Hater တွေကိုတင်မက လိင်တူချင်းချစ်ကြိုက်သူတွေရဲ့ LGBTQ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေ ကိုပါ ရည်ညွှန်းသီဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တေလာဟာ LGBTQ ကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ နိုင်ငံတကာ အနုပညာရှင်များစွာထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ပါပဲ။
ဒါ့ပြင် ဇွန်လဟာ LGBT တွေအတွက် အထူးသတ်မှတ် ပေးထားတဲ့ Pride Month ဖြစ်တာကြောင့် တေလာဟာ “You Need to Calm Down” အတွက် Lyrics Video (သီချင်းစာသား ဗီဒီယို) ကိုလည်း ကာလာစုံ အရောင်ပြေးနောက်ခံနဲ့ ဖန်တီးပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်း အတွက် Official Music Video ကတော့ ဇွန် ၁၇ ရက်မှာ ထွက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Brendon Urie နဲ့ Panic! at the Disco တို့ featuring အနေနဲ့ ပါဝင်ထားတဲ့ Me! သီချင်းဟာ တေလာဆွစ်ဖ် ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းဟာ Billboard Hot 100 မှာ နံပါတ် ၂ ချိတ်ခဲ့သလို သီချင်းရဲ့ Music Video ဟာလည်း ကြည့်ရှုသူ ၆၅ ဒသမ ၂ သန်းနဲ့ စံချိန်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် တေလာဆွစ်ဖ်ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းက ကန်းထရီးအဆိုတော်မလေးအဖြစ် ဂီတ လောကထဲ စတင် ရောက်ရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတမှာ ပါရမီထူးတဲ့ တေလာဟာ နိုင်ငံတကာက တေးပရိသတ် တွေကြားမှာ အတော်လေး ရေပန်းစားခဲ့ပြီး အခုထိလည်း အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး တေးဂီတပညာရှင်တွေထဲမှာ အမြဲပါဝင်လေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော်မလေးတေလာဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးတေးအယ်လ်ဘမ် “Taylor Swift” ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ဂီတသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Reputation” အပါအဝင် စုစုပေါင်း တေး အယ်လ်ဘမ် ၆ ခုတိတိ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် သြဂုတ်လမှာ အသစ်ထွက်ရှိမယ့် “Lover” ကတော့ တေလာအတွက် ၇ ခုမြောက် တေးအယ်လ်ဘမ် ဖြစ်ပြီး အရင်အယ်လ်ဘမ်တွေတုန်းကလိုပဲ နိုင်ငံတကာက တေးချစ်သူပရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Ref; Hollywood Reporter, Wikipedia
15 days ago by Cherry Mon
3 months ago by Cherry Mon